health care reform act summary: benefits of drinking green tea cold
benefits of drinking green tea cold E nwere ọtụtụ uru ndị na-aṅụ green tii i nwere ike inwe ma ọ bụrụ na ị na-eme ya kwa ụbọchị. E nwere ọtụtụ ndị ọmụmụ gosiri na -aṅụ tii nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ịrịba mmetụta gị idem. Ọ bụrụ na ị dịghị iwesa ma ọ bụ na-aṅụ ya emekwa , i nwere ike na-amalite na-aṅụ tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ site ugbu a . Ndị na-esonụ bụ uru nke green tii na ị nwere ike mgbe a mara n'ihu .
igbochi Ọrịa cancer
Otu n'ime uru ndị na-aṅụ green tii bụ igbochi ọrịa kansa. E nwere dị iche iche na ọrịa kansa na nwere ike isi gbochie nanị site na-aṅụ tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe niile , tinyere ara , prostate , esophageal , ngụ , eriri afo , afo , pancreatic na colorectal . Kansa nwere ike isi gbochie ruru ka catechins umi dị ndụ ndụ tii . Na umi ekeme deactivate carcinogens , gbochie cell mutation yana belata e guzobere na uto nke tumo gị idem. Ọ bụ ya mere , ọ na- na- na-atụ aro ka ị na-aṅụ na ọ dịghị ihe ọzọ anọ iko nke green tii otu ụbọchị na mgbochi ọrịa cancer uru.
I nwekwara ike inwe ndị ọzọ uru na-aṅụ tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ , ndị dị ka obi ike. Ewe green tii pụtara na ị ga- enwe ala n'ihe ize ndụ nke ọrịa obi na ọrịa strok. E nwere ọtụtụ ndị na researches na-egosi na ịṅụ oké mmanya ọ dịkarịa ala otu iko green tii mgbe ụbọchị ọ bụla nwere ike belata ihe ize ndụ nke nkụchi obi ka 44 percent. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ ọmụmụ gosikwara na -aṅụ tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe niile nwekwara ike ala cholesterol etoju.
ndị ọzọ Uru
Dị ka nke e kwuru okwu ya , e nwere ọtụtụ uru ndị na-aṅụ tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ . Wezụga abụọ uru kwuru n'elu, e nwere ndị ọzọ uru i nwere ike inwe ndị dị otú ahụ dị ka igbochi ọrịa ogbu na nkwonkwo , ala elu cholesterol larịị , igbochi ọrịa obi , n'imeso ọrịa na ntị dịghịzi ọrụ . Isi na ndị a uru bụ na-aṅụ tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ọ bụla n'ụbọchị. Cheta na i nwere ike na-aṅụ kwa ụbọchị banyere 3 4 iko .
Gịnị Na- Green tii Special ?
Ị nwere ike mụtara uru ọṅụṅụ green tii dị ka ndị e kwuru n'elu. Ndị a dị iche iche uru , i nwere ike ịnọ na-eche ihe na-eme ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii otú pụrụ iche. Ọfọn, n'ezie nzuzo nke green tii idu ke eke bekee ndị dị otú ahụ dị ka catechins na polyphenols ka ihe atụ, ma ọ bụ EGCG epigallocatechin gallate . EGCG bụ antioxidant nke dị ike na -alụ ọgụ cancer niime ụlọnga. Nke a na umi -egbu cancer mkpụrụ ndụ na-enweghị etisa ike anụ ahụ . Ọ na- lowers cholesterol etoju na inhibits guzobe egbochi mkpụkọ nke ọbara . Ndị a irè ọpụrụiche , egbula -aṅụ ya iji na-enweta uru na-aṅụ tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ .